မဒေးကျွန်းရှိ တံတားလေးစင်းကို ကွန်ကရစ်တံတားများ အဖြစ် ပြုပြင်ရန် SEAG Pipeline ကုမ္ပဏီက ငွေကျပ် သိန် - Yangon Media Group
မဒေးကျွန်းရှိ တံတားလေးစင်းကို ကွန်ကရစ်တံတားများ အဖြစ် ပြုပြင်ရန် SEAG Pipeline ကုမ္ပဏီက ငွေကျပ် သိန်
ကျောက်ဖြူ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၃
ရခိုင် ပြည်နယ်၊ မဒေးကျွန်း၊ ကျောက်တန်းကျေးရွာရှိ တံတားလေးစင်းကို ကွန်ကရစ်တံတားများ အဖြစ်ပြု ပြင်ရန် SEAG Pipeline ကုမ္ပဏီက ငွေကျပ်သိန်းလေးရာ လှူဒါန်းလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက်တွင် အရှေ့ တောင်အာရှ ရေနံပိုက်လိုင်း ကုမ္ပဏီမှ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မဒေးကျွန်း ကျောက်တန်းကျေးရွာရှိ ပြုပြင်ရန်လိုအပ်နေသည့် တံတားလေးစင်းအတွက် ငွေကျပ်သိန်းလေးရာကို ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ဒေသခံများအား လှူဒါန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ SEAG ပိုက်လိုင်းကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ယခုနှစ်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် မဒေးကျွန်းတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် စာသင်ကျောင်းဆောင်ဆောက် လုပ်လှူဒါန်းမှုများကို ဆက်လက် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါကုမ္ပဏီမှ သိရသည်။
”ဒီသိန်းလေးရာ လှူတယ်ဆိုတာ မဒေးကျွန်းပြည်သူတွေ သွားလာရေးအဆင်ပြေစေဖို့နဲ့ ဒီတံတားလေးစင်းပြုပြင်ပြီးရင် သူတို့ရဲ့လူနေမှုဘဝက ပိုပြီးမြင့်တက်လာမှာပါ။ မဒေးကျွန်းပေါ်မှာဆိုရင် လူမှုစီးပွားဖွံဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ဆယ်ခုကို ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသွား ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလုပ်ငန်းတွေထဲမှာ စာသင်ကျောင်းသုံးကျောင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်တစ်ခု၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါ ပြီ။ ဒီနှစ်အတွင်းမှာလုပ်မယ့် လုပ်ငန်းရှိပါသေးတယ်။ အခုကတော့ ငွေကျပ်သိန်းလေးရာ လှူတာပေါ့။ နောက်တစ်ခုက စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းလှူဖို့ရှိပါသေးတယ်” ဟု SEAG ကုမ္ပဏီ ပီအာရ်ဌာနမှ ဒုတိယမန်နေဂျာ ကျန်းဖူချန်ကပြောသည်။
SEAG ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လူမှုစီးပွားဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများအဖြစ် လုပ်ငန်းပေါင်း ၁၅၆ ခုကိုဆောင် ရွက်ပြီးစီးခဲ့ရာ အဆိုပါလုပ်ငန်းများအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၃ သန်း ၇ သိန်း ၃ သောင်း ကုန်ကျခဲ့ကြောင်း၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းပေါင်း ၅ဝ ကျန်ရှိနေသေးပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတွင် စာသင်ကျောင်း ၂၉ ကျောင်း၊ ဆေးခန်း ၁ဝ ခု၊ မူကြို ကျောင်းတစ်ကျောင်း၊ ဆက်သွယ် ရေးနှင့် လမ်းပန်းလုပ်ငန်း ၁၅ ခု ကို လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
တရားရုံးများရှိ အနေကြာ ဝန်ထမ်းများ ဒေသခံများနှင့် ရင်းနှီးပြီး တရားသူကြီးများနှင့် အမှုသည??
ကွင်းလယ်လူ ဒီဘရူနီကို မန်စီးတီးအသင်း ၂ဝ၂၃ အထိ စာချုပ် သက်တမ်းတိုး
ဇနီးလောင်းနဲ့အတူ အိမ်ပြောင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသားခရစ်ပတ်
PFA အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို လီဗာပူးနောက်ခံလူ ဗန်ဒိုက် လက်ခံရယူ၊ အကောင်းဆုံး လူငယ်ကစားသမား??